Umlingo weGoogle Pixel 3: iifoto zasebusuku ngaphandle kokukhanya kunye 'Nokubona ebusuku' | I-Androidsis
Umlingo wokuthatha iifoto zasebusuku ngaphandle kweflash ngemowudi ye 'Night Sight' yeGoogle Pixel 3
UManuel Ramirez | | Iiselfowuni, Izaziso
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo kwabelwana ngefoto yasebusuku apho kwakungekho flash. Thelekisa phakathi kweefoto ezimbini ezithathwe yiGoogle Pixel 3 kunye imowudi engakhanyisiyo ebizwa ngokuba 'kukubona ebusuku' ityhila inyathelo eliphambili eliya kuGoogle kufota lwesoftware. Kwaye ufuna kuphela iilensi enye ... Ukuphambana.
UGoogle ukwenze kwacaca ukuba iinjongo zakhe bachithe ngaphezulu ukuphucula isoftware yefowuni y shiya izixhobo ezisetyenzisiweyo ngasemva. Oko kukuthi, ngelixa abanye abavelisi benyanzelisa ukuba andazi ukuba zingaphi iilensi kunye nee-RAM ezinee-GB ezingakumbi kwiifowuni zabo, iG enkulu isebenza kwisibalo seArtificial Intelligence + Software + Hardware. Kwaye ifoto kaGoogle Pixel 3 sisiphumo.
1 Ifoto ixabisa i-megapixels eziliwaka
2 Umlingo ngasemva kobusuku bobusuku bukaPixel 3
Ifoto ixabisa i-megapixels eziliwaka
Esi sithombe yile ipapashiweyo kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo nguSebastiaan de With, okanye into esinokuyithetha ngokungathi yenziwe nguGoogle. Yi ifoto egqibeleleyo ukubonisa yonke into esele ithethiwe ukuza kuthi ga ngoku Kwaye kuba uGoogle uphantse walula iminyaka ngaphambi kokhuphiswano; ngoku xa sele sibonile Isamsung ineekhamera zayo ezi-4 kwi-A9 entsha. Okufanayo kuya I-selfies yeqela elimangalisayo lePixel 3.
Sijongene nothelekiso apho ubona a ifoto ethathwe ngemowudi entsha "Yokubona ebusuku" yePixel 3 kunye nenye ngaphandle kwendlela esebenzayo. Umahluko ubonakala ngakumbi kwifoto engakhange iwusebenzise. Isebenzisa ii-algorithms kunye nesoftware ukuba "ngobukrelekrele" ithathe loo foto intle ishiya ukhuphiswano ngasemva; ungaphoswa kukuqeshwa kwaye ufake izibuko losetyenziso lwekhamera zikaGoogle kwiselfowuni yakho.
Kunokuthiwa le foto ingathathwa yiyo nayiphi na ifowuni ephezulu enelensi efumana idatha engakumbi ngokuqaqamba komzuzu, kodwa umlingo wePixel 3 kukuba akukho ngxolo. Ndiyathetha, yintoni uyinciphisile ngokupheleleyo, xa kufuneka ithathelwe ingqalelo ukukhulisa iiparameter ze-ISO, kwangaxeshanye kwandisa inani lengxolo. Into esinayo ngumfanekiso ococekileyo kwaye ogqibeleleyo esinokwabelana ngawo kwinethiwekhi yoluntu.
Umlingo ngasemva kobusuku phambi IPixel 3
Ukuqonda umlingo osemva kobusuku phambi kufuneka siye kwinqaku ukuba ipapashwe nguGoogle ngo-Epreli 25, 2017. Omnye ubizwa «Uvavanyo lokufota ebusuku ngeNexus kunye nePixel ». Icaphula ifoto ethathwe ngeDSLR yesibhakabhaka ebusuku seGolide yeSango eSan Francisco, eUnited States.
Apha ungabona iifoto kubungakanani bazo bokwenyani:
Ngokuyisa kwiqela lophando likaGoogle, elijongana nefayile ye- ikhompyuter yokufota kunye nokuphuhlisa ii-algorithms "Ukunceda" ukuthatha imifanekiso kwizixhobo eziphathwayo, elinye lalamalungu lakhuthaza uFlorian Kainz, injineli yesoftware kaGoogle, ukuba ayithathe kwakhona, kodwa ngeli xesha ngekhamera ephathekayo.
Kule nqaku ubalisa ngenxalenye yenkqubo yophando, eqala kwisiseko: ukuhamba kokuqhutywa kwemifanekiso okwaziyo ukwenza imowudi ye-HDR +. Imowudi ye-HDR + kwinkqubo yekhamera yeNexus kunye nePixel ivumela ukuthatha iifoto kumanqanaba okukhanya asezantsi Ngokudubula ngokukhawuleza uthotho lweefoto ezili-10 kwiindawo ezahlukeneyo. Okokugqibela kuthathwa njengesiphumo. Nangona kkuhamba komsebenzi kukho ukusikelwa umda kwinto ye-HDR +.
Kwaye apha iziphumo zangasemva ngemifuniselo eyahlukeneyo. Ifoto yokugqibela ngasekunene ibonisa iziphumo ezilungileyo ezifunyenweyo:
Uvavanyo luye lwaqhubeka ukufezekisa iziphumo ezigqwesileyo kwiifoto ezinomfanekiso ophantsi, njengoko kubonisiwe kweminye imifanekiso kwinqaku likaKainz. Ekugqibeleni, uKainz wakwazi ukuxelela ukuba iikhamera zefowuni zokuthatha iifoto zasebusuku; ihlala inesoftware efanelekileyo kwiselfowuni ebinakho ukushenxisa amanyathelo afana "nokupeyinta" izaleko zeemaski ngesandla.
Ezo zixhobo sinazo namhlanje ziyakwazi ukuqhubekeka konke ukuhamba komsebenzi kuye Thatha iifoto ngemowudi yokujonga ebusuku yePixel 3, njengokuthelekisa okubonisiweyo apho kungasetyenziswanga khona kwaye le nyani ayinakuqondwa. Nabani na owayefundisiwe kwaye waxelelwa ukuba akukho flash isetyenzisiweyo ngekhe akholelwe kuthi. Nantsi inyani enkulu ethathwe nguGoogle ekufotheni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Umlingo wokuthatha iifoto zasebusuku ngaphandle kweflash ngemowudi ye 'Night Sight' yeGoogle Pixel 3
Uyilahla njani iNetflix kunye nomxholo weSpotify noMncedisi kaGoogle kwiChromecast kwikhaya elitsha likaGoogle
Uyifumana njani imali ebuyiswayo kuGoogle Play